Cryptocurrency tsena fampandrosoana in 2018 - Blockchain News
Janoary 7, 2018 Admin
Cryptocurrency tsena fampandrosoana in 2018
Noho ny fanombohana ny bitcoin hoavy sy Sampanteny amin'ny nentim-paharazana fifanakalozana tahiry; fametrahana mihoatra ny 100 fefy vola izay varotra cryptocurrencies; ary cryptocurrency tsena capitalization mahatratra mihoatra noho ny $500 lavitrisa in 2017, manam-pahaizana mino fa marina ny amin'izao fotoana izao cryptomarket lasa ny haingana indrindra Niroborobo Sady fanantenana indrindra orinasa ny taranaka. Efa nanangona ny fomba fijery sy ny filazana mialoha ny manam-pahaizana sy manan-danja orinasa mpitendry cryptocurrency fampandrosoana amin'ny tsena 2018.
Ny Tale Jeneralin'ny Node40, ny blockchain ny fitantanana sy ny fanarahan-dalàna cryptocurrency hetra orinasa, Perry Woodin mino fa 2018 dia ho ny taona fanentanana faobe-bahoaka ho an'ny cryptocurrency.
Tsy mandeha ho ny taona sy ny havany rehetra ho namana te-hahafantatra ny fomba tena manana sy ny fomba hividianana azy io, hoy i Woodin.
Azo antoka fa hisy ny fiakaran'ny eo ny isan'ny olona mampiasa cryptocurrencies. Jonathan Sela, SVP raharaha fampandrosoana ny fitaovana amin'ny YouNow, izay blockchain mampiasa haino aman-jery ny hanorina tontolo iainana, Tombanan'ny amin'ny faran'ny 2018, ho hitantsika eo 50 tapitrisa eran-tany mitana ny olona iray, fara fahakeliny cryptocurrency. Raha fikarohana vaovao avy amin'ny London Block Exchange (LBX) dia nanatsoaka hevitra fa ny faran'ny 2018 ny iray amin'ny telo no vola millennials ho crypto tsena.
Ny fanapahan-kevitra ny nentim-paharazana fifanakalozana tahiry CBOE sy CME ny lisitra bitcoin hoavy sy ny safidy fifanarahana nanao ny voalohany cryptocurrency 'izao tontolo izao sy ny, angamba tsy ho ela, cryptocurrencies hafa, vaovao nilaina kilasy mitovy amin'ny metaly sarobidy, angovo loharano, fatorana governemanta, ary ny maro hafa entana sy ny Fiarovana. Noho izany, taona manaraka ny toeran'ny cryptocurrencies ho mora kokoa ny ara-dalàna eo amin'ny ara-bola sy ara-dalàna efa misy rafitra. Simon Yu, Tale Jeneralin'ny StormX, nizara ity fanambarana. Izy no antoka fa 2018 dia ho iray amin'ireo tsara indrindra ho an'ny cryptocurrency taona, ary tsindrio ny tsena ho dingana vaovao.
Mandraka ankehitriny dia efa tena antsinjarany nanosika ny mpampiasa vola vidin'ny bitcoin sy ny hafa cryptocurrencies. Amin'ny hoavy tsena sy ny safidy mba hampihenana ny loza profil, kokoa ny andrim-mpampiasa vola amin'ny farany ho afaka ny fitraitraiky manomboka amin'ny. Fa amin'ny fitaovana ara-bola, dia afaka mahita tapitrisa tapitrisany dolara eo amin'ny rafitra vola mikoriana eo nandritra ny taona vitsivitsy.
Shidan Gouran, Filohan'ny Global Blockchain Technologies, Tsy misy isalasalana fa cryptocurrency hahita zava-bita lehibe kokoa teo amin'ny faravodilanitra in 2018.
“Raha manan-danja ny mpanjifa isan-jaton'ny mponina dia na mampiasa na, farafaharatsiny, aina amin'ny cryptocurrencies, toy izany koa no tsy mbola azo lazaina ny fitondram-panjakana sy ny andrim-panjakana. Izany no tokony andrasana, toy ny fikambanana, na miankina sy tsy miankina, mirona hanana fianarana intsony miolakolaka in nanangana teknolojia vaovao. Mahatsapa isika fa curve fianarana no ho zaridaina hevitra ny cryptocurrency sy ny fandrosoana blockchain in 2018, fandresena maro ny sakana izay nisakana-panjakana sy rafitra anjara eto amin'ity sehatra. Izany dia hitondra ny rehetra teo ihany pejy, karena indrindra ny mety ireo teknolojia miaraka amin'ny fandraisana anjaran'ireo fikambanana pahefana, mamoha miasa izay tsy ho tanteraka raha tsy izany. Teo anelanelan'ny rafitra foana fampiasam-bola amin'ny cryptocurrencies, ny fanatitra ho bitcoin mifototra amin'ny hoavy, ary ny fitondram-panjakana manomboka hiasa amin'ny tetikasa ny blockchain, any no misy efa soritr'aretina ireo teknolojia misambotra eo amin'ny vahoaka sy ny andrim-panjakana. izahay, noho izany, mialoha ny 2018 dia hahita fivoarana sy ny fananganan-jaza maharitra, fanorenana ny efa misy fandrosoana ny daty amin'ny alalan'ny vaovao mandray mpandray anjara”.
Araka ny Tale Jeneralin'ny Biddable Mark Lurie, mpampiasa vola maro dia hifantoka amin'ny hafa cryptocurrencies, anisan'izany ny litecoin, dash, ary iota, fa tsy bitcoin na Etera. Lurie dia mino fa amin'ny vola, in 2018, misy ny mandeha ho matanjaka amin'ny diversifying cryptoassets hanoto sy ny fampiasam-bola crypto fitantanana dia nisy olana ny fomba nentim-paharazana mpampiasa vola mijery fananana sy ny vola.
Mike andry, Tale Jeneralin'ny ny Crypto Company, nanamarika fa tsy volatility in Bitcoin dia hisy vokany eo amin'ny hafa cryptocurrencies ary koa hahita ny fiakaran'ny ny Fiarovana famantarana. Ary mialoha ny tsena Cap ny $5 tapitrisa tapitrisa tamin'ny faran'ny taona.
dmitriy Zhulin, Mpiara-manorina ny ins Tontolo Iainana, manantena fa rehefa manohy ny teknolojia blockchain hamolavola, bitcoin dia hitombo ho amin'ny eo ho eo $30-40,000 in 2018 mifototra amin'ny ny tsy hanahirana sy ny fananganana antsika ho bebe kokoa ny fomba fandoavam-bola sy ny fiarovana Renivohitra. Ary, Trevor Koverko, ny Filohan'ny Canadian orinasa Polymath, dia mino fa Bitcoin dia niseho toy ny fandoavam-bola Network.
“Amin'izao fotoana izao Bitcoin dia nampiasaina ho toy ny tombantombana-pananana sy ny fitehirizana ny zava-dehibe. Fa ny scaling vahaolana toy ny tselatra Network mipoitra ( Bitcoin-monina tambajotra, izay mamela ireo mpampiasa mba tsy voafetra micropayments - DeCenter), bitcoin ny jiro be kokoa miaraka sy ny vidiny. Ny tena fanontaniana dia izany no hatao ny bitcoin 'tena rojo’ izay manana ny herim-po hanaraka izany fanavaozana izany, na dia ho toy ny rojo vy iray hafa Bitcoin Cash?”
Cryptocurrency tsena fampandrosoana
7 Best Blockchain Development Training, Courses sy ny Certifications
Putin: Rosia mila hampandrosoana ny crypto sy blockchain teknolojia
Rosiana Filoha Vl ...
CEO Twitter dia milaza Co ...
Next Post:Ahoana no blockchain hampivelatra ny teknolojia ao 2018?